Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Tokony hisaron-tava ny zava-mitranga any Vegas
Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Masking up any Vegas
Ny Distrikan'ny Fahasalamana any atsimon'i Nevada dia mamporisika ny olona rehetra mba hisaron-tava indray rehefa any an-trano sy amin'ny toerana be olona na vita vaksiny na tsia ary efa nanandrana ny ratsy na tsia.
Ny isan'ny tranga COVID-19 dia mitombo any Las Vegas, Nevada, toy ny tranga any amin'ny toerana maro manerana ny firenena sy manerantany.
Tsy fepetra takiana amin'ny fomba ofisialy izany, satria ny fanjakan'ny fanjakana sy ny tanàn-dehibe ihany no afaka mitaky izany.
Ny tolo-kevitry ny saron-tava dia tonga taorian'ny nitateran'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana omaly tranga 938 manerana ny firenena - ny fitsambikinana iray andro lehibe indrindra hatramin'ny volana febroary - ary 15 ny fahafatesan'olona vaovao.
Ity tolo-kevitra matanjaka ity dia misy fiatraikany amin'ny filokana, kaonseritra ary klioba izay nitombo ny fandraharahana hatramin'ny nanesorana ny fameperana ary naverin'ny fanjakana tamin'ny fomba feno ny fepetra momba ny fifehezana ny areti-mandringana amin'ny distrika manodidina ny 7 herinandro lasa izay.
"Ny olona vita vaksiny sy tsy vita vaksiny dia tokony hisaron-tava rehefa eny amin'ny toerana be olona… toy ny fivarotana enta-mavesatra, magazay, hetsika lehibe ary trano filokana" hoy ny Dr. Fermin Leguen, tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana ao amin'ny faritra, tamin'ny mpanao gazety. Mitohy hatrany ny tobim-pitsaboana vaksinina sy ny fitiliana any amin'ireo toerana manodidina ny faritra, hoy ihany i Leguen.
Ny tahan'ny fanaovam-baksiny dia nijanona tato anatin'ny herinandro vitsivitsy tao Nevada, fanjakana misy fironana libertarian izay nitateran'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ny zoma fa 55 isan-jaton'ny mponina 12 taona no ho miakatra no nahazo fatra farafaharatsiny. Vaksiny fanefitra covid-19. Manerana ny faritra, 46.3 isan-jato no vita vaksiny tanteraka. Amin'ny firenena, 68 isan-jaton'ny olon-dehibe no nahazo vaksin farafahakeliny farafahakeliny, hoy ny Centers for Disease Control and Prevention.
Nisy tompon'andraikitra iray miaraka amin'ny sendika misolo tena ny mpiasan'ny trano filokana any 60,000 97 Nevada namoaka fanambarana nanamarika ny loza mety hitranga amin'ireo mpiasa tsy vaksiny. Ny tompon'andraikitra ao amin'ny Culinary Union Geoconda Argüello-Kline dia nanondro ny angona CDC fa maherin'ny 19 isan-jaton'ny olona nampidirina hopitaly vao haingana niaraka tamin'ny COVID-XNUMX no tsy nahazo vaksiny.